Diyaarad aan la aqoon ujeedkeeda oo fadhiistay Deegaanka Xaydhanyaale oo ka tirsan Gobolka Sanaag | maakhir.com
Diyaarad aan la aqoon ujeedkeeda oo fadhiistay Deegaanka Xaydhanyaale oo ka tirsan Gobolka Sanaag
January 1, 2008 in Somalia
Laasqoray:- Wararka haatan naga soo gaadhaya magaalada Laasqoray ee Gobolka Sanaag ayaa waxay daboolka ka qadayaan inay saaka halakasi soo fadhiistay Diyaarada nooca loo yaqaan Elicobtarta ah, taasi oo aan la aqoon Dalka Laga leeyahay, diyaaradaasi ilaa iyo hataan lama sheegin cid rikaab ah ama la socotay diyaaradaasi.
Warka aanu ka helayno Deegaanka Xaydhanyeele ayaa waxay sheegayaaan inay diyaaradaasi ay gacanta ku hayaan waxgaradka deegnaakaasi,iyaga oo sheegay inay ahayd nooca sahanka ama loo isticmaalo inay xog dheeraad ah ka qaadaan Dhulka dushiisa.
Ilaa iyo haatan diyaaradaasi ayaa waxay fadhidaa deegaanka Xaydhanyeele oo dhinca Galbeed Degmada Laasqoray ka xigta ilaa 25-Km, waxana la soo tabinayaan inaanay jirin wax afduubah oo diyaaradaasi goobtaasi lagu fadhiisiyay,waxana Amaanka diyaaradaasi sugayay waxgaradka deegaanka.
Sida noo sheegay mid ka mid ah waxgaradka deegaankaasi oo lagu magcaabo Duub C/laahi Shiikh Maxamed waxana uu sheegaya inaa nay jirin wararka sheegaya in la Afduubay diyaaradaasi Balse ay ku waa bariisteen iyada oo halkaasi fadhida, waxa uu sheegay duubkaasi inay wadaan Baadhitaano xoogle oo lagu ogaanyo ujeedka Diyaaradaasi ay meesha u soo gaadhay.
Wixii war ah oo ku soo kordha Diyaaradaasi iyo Sawiro Goor dhaw Naga suga Hadii Eebe Idmo.
« Qarax xoogan ayaa caawa Gil Gilay gudaha Magaalada Bosaaso
Rabshado xoogan ayaa ka socda Dalka Kenya kadib is maan dhaaf siyaasadeed oo yimi »